अन्तत: ओली सरकारका नाममा सर्वोच्चले दियाे यस्ताे अन्तरिम आदेश, अब के गर्लान ओली ? — Sanchar Kendra
अन्तत: ओली सरकारका नाममा सर्वोच्चले दियाे यस्ताे अन्तरिम आदेश, अब के गर्लान ओली ?
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद टेलिकम कम्पनी एनसेललाई तत्काल कुनै कर नलगाउनु र त्यसको प्रक्रिया पनि नथाल्नु भनी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यसैबीच प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथिको आजको सुनुवाइ सकिएको छ । बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । अर्को बहस शुक्रबार गर्ने निधो भएको छ । आजको सुनुवाइमा रिट निवेदकले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न माग गरेकोमा सरकारी पक्षले त्यसमा असहमति जनाएको छ ।